Motoroollada heerka hoose ee matoorrada warshadaha iyo Koontaroolka Gawaarida
Awoodda Korantada-Hoose ee heerka hoose ee qalabka warshadaha
Iibka Tooska ah ee Wershadaha ee Gawaarida Wershadaha Dhabta ah
Ka xulo matoorrada waajibaadka warshadaha kala duwan. U hel matoorkaaga warshadaha baabuurta si fudud
Adigoo adeegsanaya silig tayo sare leh oo bir ah iyo bir, ku dhawaad ​​100 geedi socod ah, si fiican u shiid, ha kuu ogolaato inaad isticmaasho nabadgelyo maskaxeed badan; rotor-sax sax ah, hawl gal siman, yareyn lumid, tamar badan iyo cimri dheraad; xiddigo bir ah oo tayo sare leh oo tayo sare leh si loo hubiyo isku-xir dhow, rotor Smooth iyo hawlkar hufan.
Iyadoo sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan codsiga mootada indusrial, Waxaan u qorshayno oo soo saarno matoorrada warshadaha iyo alaabada dhaqdhaqaaqa howlaha ee suuqyada Ganacsiga, Warshadaha, iyo Aerospace iyo Difaaca. Matoorradeena waxaa ka mid ah waajibaadka beeraha, HP qayb ahaan, caddeynta qaraxa, matoorrada ac & dc. maaraynta bagaashka iyo tafaariiqleyda dalabka ah; Xarumaha wax soo saarka iyo geeddi-socodka. Alos, waxaan bixinaa dayactirka mootada adeegga, dayactirka mootada warshadaha, iibinta gawaarida cusub & cusbooneysiinta, adeegga iibka kadib iyo caawimaad farsamo.
Warshadaha Warshadaha AC & DC
Gawaarida yar yar ee gawaarida
Warshadaha DC Gawaarida
Caddaynta Qaraxyada warshadaha
Warshadaha Gawaarida Sare
Waxaan soo saareynaa dhammaan noocyada matoorrada waxaan sidoo kale u qaabayn karnaa matoorka sida ku xusan baahiyaha iibsadaha. Waxaan haysanaa sannado badan oo waayo-aragnimo wax soo saar ah, sheyga wuxuu adeegsadaa qaabeynta hollow ah, taas oo ka dhigeysa waxqabadka kuleylka kuleylka mid aad u sarreeya; isticmaalidda qarka sare-toosan, xulashada agabka wanaagsan, soo-saarka saxda.
Soosaarka mootada warshadaha, matoorrada korantada warshadaha ee iibka ah, 5 HP Air Compressor Electric Motor, taageerooyinka adeegga mootada warshadaha iyo noocyada mootada warshadaha ee aan adeegno waxay u ballaaranyihiin siemens, WEG, TECO Leeson, Baldor, ABB, Bison, Marathon, KB, Grove iwm. Adeegyada dayactirka mootada korantada ee warshadaha oo ay kujiraan dib-u-habeynta mootada, shredder, shaashadda, iyo dayactirka matoorka korantada. Loogu Talo Galay Taageerayaasha Wadajirka ah (TEFC) Electric Motors - Waa la Isticmaalay, Loo Iibiyay, Iibso, Iib, Ganacsi, adduunka oo dhan.
Waxaan soo saarnaa dhammaan noocyada matoorrada, waxaan sidoo kale sameyn karnaa matoorro iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.Waxaan bixinnaa alaab tayo sare leh, qiimo jaban. Waxaan u qaadaneynaa tayo ahaan faa iidadeena iyo qiimaha ugu hooseeya waa daacadnimo.
Kaalmada dalabka ee xalalka warshadaha iyo mashiinnada dhisa waa takhasuskeenna. Sanado badan oo khibrad ah waxaa ka mid ah Electric Motors, Gearboxes Mechanical, Pump Motors, Warshadaha korontada ku rakibida & Xakamaynta, hawo soosaarka warshadaha, Adeeg 24-saac ah oo looga jawaabayo dhamaan su'aalahaaga.
Waxaan nahay mid ka mid ah sumadaha ugu horeeya ee laga heli karo suuqa kaasoo iibiya isla markaana u adeegaya matoorrada warshadaha waaweyn khadka tooska ah ee iibinta noocyada kaladuwan ee matoorrada korantada oo hooseeya, xooga faraska jajaban ilaa awooda sare, dhexdhexaad dhamaan matoorrada korantada tayada leh oo loo isticmaali karo warshadaha kala duwan codsiyada.
Sanado khibrad soo saarista matoor ah ayaa kaliya lagu siinayaa tayo sare oo waara. Waad ku nasan kartaa tayada matoorkeena
Degdeg ah & Wax-ku-ool ah
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku faraxsanaan doonnaa inaan ku caawino! Adeeggeenna macmiilku maalinta oo dhan waa khadka tooska.
Warshadaha ugu Fiican
Waxaan leenahay khubaro yar oo gudaha ah oo leh cilmi baaris madax-bannaan iyo karti horumarineed, waxaanan ka mid nahay shirkadaha xirfadleyda ah ee yar sidaa darteed fadlan iska hubso
Moodel kasta oo matoor leh wuxuu leeyahay qiime qiime u gaar ah, waxaan noqonaynaa mid is bedbeddela iyadoo la raacayo baahiyaha iibsadaha, dhimisyo badan iyo waxyaabo intaa ka sii badan. Fadlan la xiriir adeegga macmiilka wixii faahfaahin ah.
Haddii aad haysatid alaabada aad ugu jeceshahay, kaalay oo nala soo xiriir!
Na soo wac wixii duulimaad ah
ama noogu soo dir emailka